Ihe omuma ihe omimi Ihe ntanetị Web
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke iwepụta nnukwu data nke si na weebụsaịtị dị iche iche eji ngwá ọrụ a na - akpọ nchịkọta weebụ . Enwere ike ịchekwa data ahụ na nchekwa ma ọ bụ ebe ọ bụla. Enwekwara ike ịchekwa ya na nchekwa data na tebụl ma ọ bụ usoro mgbasa ozi.
A na-ahụ ọdịnaya nke ọtụtụ weebụsaịtị naanị iji ihe nchọgharị weebụ - preis app entwicklung. Ị nweghị ike ịchekwa otu maka ojiji nkeonwe gị. Nanị nhọrọ gị bụ iji dozie ọdịnaya ahụ na ibe ya. E wezụga ịbụ ndị na-agwụ ike ma na-akụda mmụọ, ọ na-ewekwa oge. Were ya na ị ghaghị idetu ọdịnaya nile nke ebe nrụọrụ weebụ 200-paged. Ọ ga-ewe oge dị ukwuu!
Otú ọ dị, nchịkọta weebụ bụ usoro nke nwere ike imepụta usoro a. Kama iweghachi akwụkwọ ntuziaka, ngwanrọ weebụ ma ọ bụ nchịkọta weebụ ga-arụ ọrụ ahụ n'oge dị mkpirikpi. Ọ ga-azọpụta gị ọtụtụ ihe mgbu, mgbalị na oge.
Akụrụngwa nwere ikike iji wepụ ihe dị iche iche nke data site na ọtụtụ ibe weebụ nke weebụsaịtị dị iche iche site na arịrịọ gị. Ugbu a, e nwere ụdị isi abụọ nke ebe nrụọrụ weebụ. Ebumnuche ọ bụla ma ọ bụ weebụsaịtị. N'aka nke ọzọ, enwere ike ịmepụta ihe ọ bụla iji rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ọbụla ọ bụla ị chọrọ, nanị ị ga - pịa otu bọtịnụ iji wepu na zọpụta ụfọdụ data na kọmputa gị. 3)
N'ihi eziokwu ahụ bụ na ụgwọ nke omenala wuru ngwanrọ dị nnọọ elu, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịga maka ntanetị weebụ wepụ ihe nchọgharị weebụ. , karịsịa maka onye ọrụ na-abụghị ndị ọrụ nchịkwa, ha na-esikarị ike ịmụta.
Nke a bụ ebe WebHarvy na-abịa na njedebe. na-enye ihe na-emetuta, na -eme ma pịa etiti ace. Site na WebHarvy, nchịkọta data site na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla bụ ihe dị ka nkeji ole na ole.
Ngwaọrụ na-abịa na vidio vidiyo nke gosiri otú ọ dị mfe ọ nwere ike melite ma jiri ya maka mkpapụ data gị. Mgbe ị na-ele vidio ahụ, ị ​​ga-amụta otú o si dị mfe na pịa interface bụ. Ihe n'ezie na-apụ na ngwá ọrụ a bụ eziokwu ahụ na ọ dịghị achọ ka ịchọta ịhazi. Enwere ike ịhazi ya iji wepu data site na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na igirigi ole na ole nke òké gị. Iji họrọ data a ga-ewepụ, naanị ị ga-edezi òké gị na ihe data. Iji nyochaa ya, ịnwere ike ịnwale ụdị nyocha ya, ma ị nwekwara ike ịhụ ihe ngosi vidiyo ahụ.
Ihe mere ị kwesịrị iji nwalee WebHarvy:
Ịbụ ihe ntanetị nke ihe ntanetị, ọ dị ọnụ ala karịa omenala ndị e wuru
Ọ dịghị achọ koodu maka ịtọlite ​​ma jiri ( 33)
Ọ dị mfe iji ọbụna maka onye ọrụ na-enweghị ọrụ
Ọ na-abịa na nsụgharị nyocha na ntinye vidiyo